Soosaaraha Kubbadda Cagta Midabkeedu Fiicanyahay ee OPE | Erbo
Magaca: HDPE Kubbadda Cagaarka Liin Dhanaanta.
Cabir: 30cm * 30cm * 30cm.
Iyada oo hal ku dhiggan maskaxda lagu hayo, waxaan hadda u soo jeesanay inaan ka mid noqonno kuwa ugu macquulsan farsamada casriga ah, kharash-ku-ool ah, iyo soo-saareyaasha qiimaha u tartamaya ee keenaya OEM Shiinaha Yellow Orange Red Buoy Line oo dul sabeynaya Biyaha, Waxaan soo dhoweyneynaa macaamiisha, ururada shirkadaha iyo asxaabta ka socota dhammaan qaybaha adduunka inay nala hadlaan oo ay iskaashada ka raadsadaan dhinacyada wanaagsan ee wadaagga ah.
Bixinta OEM Shiinaha Ball Floater, Ball sabaynta, Waa inaad dareentaa lacag la'aan inaad noosoo dirto faahfaahintaada waxaanan kaaga jawaabi doonnaa si dhakhso leh. Waxaan helnay koox injineernimo xirfad leh oo u adeegta mid kasta oo baahi qoto dheer leh. Tijaabooyin bilaash ah ayaa loo diri karaa kiiskaaga shaqsi ahaan si loo ogaado xaqiiqooyin intaa ka sii badan. Si aad ula kulmi karto rabitaankaaga, hubi inaad runti dareento lacag la’aan inaad nala soo xiriirto. Waxaad noo soo diri kartaa emayl oo si toos ah ayaad noo soo wici kartaa. Intaa waxaa sii dheer, waxaan soo dhaweyneynaa booqashooyinka warshadeenna ee adduunka oo idil si aad ugu wanaagsan aqoonsiga shirkadeena. nd badeecad. Ganacsiga aan la leenahay ganacsatada dhawr dal, waxaan inta badan raacnaa mabda'a sinnaanta iyo ka wada faa'iidaysiga. Waxaan rajeyneynaa inaan suuqgeyno, dadaal wadajir ah, ganacsi iyo saaxiibtinimo si aan uga wada faa'iideysano. Waxaan rajeyneynaa inaan helno weydiimahaaga.
Qalabka sifiican loo maamulo, shaqaalaha khibrada u leh dakhliga soo gala, iyo adeegyada khabiirka iibka kadib oo aad ugafiican; Waxaan sidoo kale nahay qoys ballaaran oo mideysan, qof kasta wuxuu ku dhegan yahay qiimaha shirkadda "midaynta, u-gogol-qaadka, dulqaadka" ee Shirkadda Shiinaha ee New Product China Line of Orange Coloured Marker Buoys Stung by Cable floating Across The Lake From Shore (FQ-500), Dhammaan alaabooyinka waa lagu soo saaray qalab casri ah iyo nidaamyo adag oo QC ah si loo dammaanad qaado tayada ugu sareysa. Ku soo dhawow rajooyinka cusub ee duugoobay si aad noogu haysato iskaashiga ganacsiga ganacsiga.
Shiinaha New Product Shiinaha Mooring Buoy, Ball sabayn, Sababta oo ah u heellan our, waxyaabaha our si fiican u yaqaan adduunka oo dhan iyo mugga our dhoofinta si joogto ah u koraa sannad kasta. Waxaan sii wadi doonnaa inaan ku dadaalno heer sare anagoo siineyno alaab tayo sare leh oo ka badnaan doonta rajada macaamiisheena.
Xiga: HDPE Kubad Miisaamaysa Buluug Buluug ah